Seza birao filalaovana, birao mijoro, latabatra gaming ho an'ny mpanamboatra solosaina mpanamboatra sinoa - TWOBLOW
RGB Gamer Desk miaraka amin'ny maody fanaraha-maso lavitra ZA
Birao filalaovana Miaraka amin'ny RGB Model LY
Foshan Qianbei Hardware Furniture Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2013. Orinasa varotra maro samihafa manambatra ny famokarana, ny varotra ary ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra. Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana ny matihanina amin'ny fifaninanana elektronika fanaka, ao anatin'izany ny singa telo lehibe: latabatra filalaovana, birao fananganana ary seza filalaovana. Ny vokatra dia mety amin'ny latabatra sy seza filalaovana an-trano, ary koa amin'ny kafe Internet, kafe an-tserasera vaovao, ary fanaka manokana namboarina manokana ho an'ny lalao tanana sy ny efitrano lalao E-sport.
Hatramin'ny niandohan'ny fananganana azy dia napetraka tamin'ny famokarana vokatra avo lenta ny orinasa. Manomboka amin'ny latabatra sy seza cafe Internet ka hatramin'ny birao filalaovana sy seza, dia nohajainay hatrany ny kalitao ho toy ny fari-piainan'ny orinasan-tserasera, an-jatony toy ny sehatry ny fiaraha-miasa an-jatony, izay maneho ny làlan'ny fivelaran'ny orinasantsika nandritra ny taona maro: mba ho tafavoaka velona! ”
Mizaha ity vokatra manaraka vaovao ity ity
Seza birao Modely P005
Birao maotina azo ovaina amin'ny latabatra solosaina mod ...
Birao manainga môdely tsy manam-paharoa maodely Model HA-02
R modely birao filalaovana toekarena endrika GT-01
Latabatra Gamer 140cm misy tongotra T shpe sy totozy pa ...
Tranonkala vaovao! Taorian'ny asa mafy sy fanoloran-tena nandritra ny volana maro dia faly izahay mizara izany amin'ny fomba ofisialy aminareo rehetra. Misy ny fandefasana tranokala vaovao ary ny URL dia www.twoblow.com.
152021 / Oktobra
Manantena ny fifantohan'ny andro voalohany amin'ny vondrona vondrona S11 ireo ekipa efatra LPL dia eny an-tsehatra ary miezaka ny manomboka tsara.
Taorian'ny andro nahafinaritra dimy nahatafiditra sy fialantsasatra iray andro tamin'ny 2021 League of Legends Global Finals, ekipa 16 no voatondro handray anjara amin'ny sehatry ny vondrona, izay mizara ho vondrona efatra araka ny valin'ny fisarihana teo aloha. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia hanana fi ...
132021 / Oktobra
Nandroso tamin'ny dingana LOL World Group ny ekipa Japoney.
Tamin'ny alina farany fialantsasatry ny fetim-pirenena sinoa, miaraka amina barrage feno écran toa an'i "Youxi", "fanafihana tampoka an'i Pearl Harbor" ary "fiakaran'ny fanjakana", ny ekipa DFM nisolo tena ny LJL ligin'i Japoney dia nandresy ny C9 tamin'ny titre an'ny "Fahazavan'i N ...
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famokarana sy ny fampandrosoana ny matihanina amin'ny fifaninanana elektronika fanaka, ao anatin'izany ny singa telo lehibe: latabatra filalaovana, birao fananganana ary seza filalaovana.
Adiresy: Miangona irery No. 1, Foshan Zifeng Plastic Industry Co., Ltd., No. 6, atsimon'ny West Jixiang Road, Jitingwei, faritra indostrialy Pingnan, Pingzhou, Distrikan'i Guicheng, Distrikan'i Nanhai, Foshan City, Guangdong, Sina
Telefaona: + 86-13690809876